Mallard girini nemagetsi orenji, iwo maviri matsva mavara eiyo Smart Folio uye Smart Cover | IPhone nhau
Mallard girini uye yemagetsi orenji, iwo maviri matsva mavara eiyo Smart Folio uye Smart Cover
Ngirozi Gonzalez | 21/04/2021 15:00 | iPad, Noticias
Mharidzo dzeApple hadzingori chete nenzvimbo yezvigadzirwa zvitsva uye masystem matsva Ivo zvakare vanopedza nguva kusanganisa mivara mitsva, zvishongedzo zvitsva, uye nzira nyowani dzekuyedza kuwana vashandisi vanotova neyako mudziyo wekudyara zvakatowanda mukuzvigadzirisa. Apple ine huwandu hukuru hwemakesi kune ese ayo mafaera. Kunyanya, izvo zvinovhara Smart Folio y Smart Kavhara yePadad, pane zvinhu zviviri zvinokwezva kuchengetedza piritsi reapuro hombe. Mushure mehurukuro yanezuro, Mavara maviri matsva akawedzerwa kutambira chitubu: Electric Orange uye Mallard Green.
IPad Smart Folio uye Smart Cover vanowana maviri matsva mavara
Iyo Apple Smart Folio kesi inodzivirira chishandiso kubva kumberi uye kumashure, nepo Smart Cover ichingodzivirira iyo iPad kubva kumberi. Iyi yekupedzisira kesi yaive nemavambo ayo neiyo 2 iPad, iyo yakaunza magineti ayo akaratidzira kumberi uye shure mune zvishongedzo kuchengetedza Apple iPads. Ese maPads ane inoenderana Smart Folio uye Smart Cover modhi so iyo mivara mitsva yatiri kutaura nezvayo nhasi inosvika kune ese mamodheru emhando.
Iyo nyowani iPad Pro inosvika ine yechokwadi misiyano "Pro" maficha
Aya ndiwo maviri mavara matsva anonzi naApple orenji yemagetsi uye green mallard. Mavara maviri akasiyana kune ayo isu takajaira muBig Apple uye izvo zvinotibvumidza isu kuti tipe chitubu kubata kune edu zvishandiso.
Mitengo yenyaya idzi inosiyana zvichienderana neiyo iPad uye saizi yayo. Semuenzaniso, iyo Smart Cover yeiyo yechisere chizvarwa iPad inodhura makumi mashanu nemashanu euros, nepo iyo yakafanana kesi yeiyo mini mini inodhura makumi mana nemashanu euros. Kune rimwe divi, iyo Smart Folio yeiyo 8-inch iPad Pro inosvika 55 euros, nepo iyo kesi imwechete yeiyo 45-inch iPad Pro iri 12,9 euros. Unogona kutarisa mitengo uye zviripo mu Apple yepamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Mallard girini uye yemagetsi orenji, iwo maviri matsva mavara eiyo Smart Folio uye Smart Cover
Dhawunorodha nyowani yepepuru iPhone 12 Wallpaper